Stephanie Meyer Bhuku Nyowani Kunze kweiyo Twilight Universe | Zvazvino Zvinyorwa
Stephanie Meyer, munyori anozivikanwa pasi rese nekuda kwake Twilight saga, ichaburitsa inova nyowani, kunze kwayo Twilight zvakasikwa, pakupera kwegore rino, munaNovember, ane zita rekuti Chemist. Mupepeti waro, Little Brown, akazivisa Chipiri chapfuura kuti Iyo Chemist, chisori chinonakidza, ichaburitswa muUnited States, uye pamwe muUnited Kingdom, musi waNovember 15.
Iye Chemist anofungidzira iyo kutanga kuonana kwemunyori mungano yevakuru sezvo mubhuku iri ichave iri nguva yekutanga kuti munyori anyore nemunhu mukuru protagonist. Mutambi mukuru anga asingazivikanwe nemaune murondedzero yakasarudzwa nemuparidzi, kunyangwe zita rekuti "ake akasarudzika matarenda" anoratidza kuti munyori anonamira nemhando yemweya.
1 Zvinyorwa zveThe Chemist, Stephanie Meyer
2 Saga rake rinozivikanwa kwazvo: Twilight
3 Rimwe bhuku remunyori: Anogamuchira
Zvinyorwa zveThe Chemist, Stephanie Meyer
“Aishandira hurumende yeUnited States, asi vashoma chete ndivo vaiziva nezvazvo. Aive nyanzvi mumunda wake, chimwe chezvakavanzika zvakaipisisa zvesangano repasi pevhu, saka haana kana zita. Uye pavakafunga kuti aive nenjodzi, vakaenda kwaari vasina kunyeverwa.
Kana iye waimbove murairidzi akamupa nzira yekubuda, anoona kuti ndiwo mukana wake wega wekudzima chakanangwa kumusana kwake. Asi izvi zvinoreva kutora rimwe remabasa ako ekupedzisira evashandi. Kukutyisa kwake, ruzivo rwaanowana rwunoita chete kuti mamiriro ake ave nengozi.
Achigadzirisa iyo kuti abvise kutyisidzira, anogadzirira imwe yeakanyanya kurwa kwehupenyu hwake, asi ipapo anosangana nemurume anongoda kuomesa hupenyu hwake. Sarudzo dzake padzinodzikira nekukurumidza, anofunga kushandisa matarenda ake akavanzika munzira dzaasina kumbofungidzira.
Saga rake rinozivikanwa kwazvo: Twilight
The saga Twilight yaive nyaya yakaita kuti Stephanie Meye ave nemukurumbirar, achirondedzera nyaya yemurume wechidiki weAmerica anonzi Bella Swan akadanana nevampire, Edward Cullen. Kune anopfuura zana remamiriyoni emakopi akatengeswa pasirese akawedzerwa iyo firimu inoenderana naKristen Stewart naRobert Pattinson.
Rimwe bhuku remunyori: Anogamuchira
Kune rimwe divi, munyori akaburitsawo muna2008 nyaya nezvevatorwa, Mugamuchiri, muenzi, uyo akatengesawo makopi akati wandei asi, ane vhezheni yefirimu ane Saoirse Ronan, kwaive kukundikana kana tichienzanisa nesaga rake rakakurumbira. Panyaya iyi akangowana mamirioni makumi matanhatu nemasere zvinova zvisina kana zvichienzaniswa nemamirioni anopfuura mazana mashanu echikamu chekupedzisira chesaga reTwilight.
Nekudaro, Iyo inomiririra chikamu che trilogy yeiyo, kubva pakaburitswa bhuku rekutanga muna2008, hakuna kumbove nenhau uye munyori anoita kunge asiri kurangarira kuvapo kweimwe saga kubvira, kubvira pakaburitswa saga yake yemadekwani nebhuku iri, Stephanie Meyer anga achingotsikisa akateedzana enoverengeka akatorwa kubva kuTwilight universe. Iyo Chemist ichave iri nyowani nyowani isina kumisikidzwa muchadenga masikati kweanopfuura makore mashanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Stephanie Meyer Bhuku Nyowani Kubva Kunze kweTwilight Universe